घले गाउंकेा संझनामा | manka kura
« नानीदेखि लागेको वानी
हार्दिक श्रद्धान्जली »
घले गाउंकेा संझनामा
अघिल्लेा दिन वेलुका ९ वजे तिर उत्तम भाइकेा फेान अायेा । दाइ भेाली र पर्सी तपार्इकेा फुर्सत छ भनेर उनले सेाधे । भेाली त युद्ध प्रसाद मिश्र ट्रस्टकेा साधारणसभा कार्यक्रम थियेा किन र मैले सेाधे । मिल्छ भने भेाली लमजुङकेा घलेगाउं विध्यार्थी लिएर जान लागेकेा छु जाउ न उत्तमले भने । म देाधारमा परे । दुर्इ मध्ये एउटा रेाज्नु पर्ने वाध्यता अार्इपर्रयेा । म एकछिन अलमलिए । मिश्रकेा साधारणसभामा जाने मन र इच्छा हुंदा हुदै पनि यतिखेर मलार्इ घले गाउं नै जाउं जस्तेा लाग्येा । किन भने म एक्लै त्यहा जान सक्ने थिइन । घुम्न जाने कुरामा साथीभार्इ मिलिहाल्ने कुरा पनि ठूलेा कुरा हुन्छ । त्यसैले एक्मी कलेजले अायेाजना गरेकेा त्यस शैक्षिक भ्रमणा कार्यक्ममा जाने स्वीकृति जनाए ।
विहान सवेरै ६ वजे हिंड्ने भने पनि ७.४५ वजे मात्र तीनथाना गाविस अगाडीवाट हाम्रेा यात्रा शुरू भयेा । भदैा महिनाकेा अाधा अाधी विते पनि यसपाला झरी रेाकिएकेा थिएन । सदा झै झरीले वाटेालार्इ रूझाएकेा मात्र हैन ठाउं ठाउंमा पहाडकेा चेाकटा चेाक्टा खार्इ रहेकेा थियेा । खेाल्सा खेाल्सी खहरे जवानीकेा मादमा अाफनेा वाटेा विर्सेर यत्रतत्र हिंडिरहेकी थिर्इ । वनपाखावाट फुत्त निस्किएर जवानीकेा सुन्दरता देखाउंदै छांगेा वनेर खसिरहेकी थिर्इ । हामी भने उसका निरवस्त्र नांगेा सुन्दरता हेर्दै हेर्दै करिव १२.३० वजे तिर पृथ्वीराजमार्गकेा डुम्रे पुग्यैा । पश्चिमजाने वाटेालार्इ वार्इ वार्इ गर्दै हामी ठूलेावाटेा छेाडेर उत्तर तर्फकेा सानेा सडक डुम्रे चन्दावती चेाक हुंदै अगाडी हान्नीयैा । सडककेा दाहिने तिर मर्स्याङदी नदी सेतै पछ्रयैारी हल्लाउंदै हस्याङ फस्याङ गर्दै कसैसंग मिल्न कुदिरहेकी जस्ती देखिन्थी । सडककेा दाया वाया, मर्स्याङदी किनारमा हरियेा धानकेा गांजेा हावा संग पैांठाजेारी खेलिरहेकेा थियेा । हाम्रेा गाडी नागवेली परेकेा वाटेा नाप्दै वेसीसहर सम्मकेा ४२ किलेामिटर लामो पटुके वाटेालाइ छेाट्याउंदै अगाडी वढीरहेकेा थियेा । विकासकेा अाभास दिन वस्तिहरूले कंक्रिटकेा थुप्रेालाइ अाफुमा समाहित गरिरहेकेा जस्तो लाग्थ्यो । वाटामा पर्ने स्याम्वास, खहरे, भानु र तुरतुरे हुंदै हामी दाहिने तिर रहेकेा फलामे पुल पार गर्दै पारी पटृी पुग्छैा । उकालेा अेारालेा हुंदै काठमाडैा वेशीसहर ,पेाखरा वेशिसहर चल्ने यात्रुवाहक गाडीहरू वाटेामा अेाहेार देाहेार गरेर यताकालार्इ उता , उताकालार्इ यता अेासारी रहेकेा थिए । गाडीहरू पटुके वाटेामा जम्काभेट भै हाल्दा अाफना गतिमा हुंइकिन नपाएर दुवै अलमलिन्थे । सुन्दर भविस्य वेाकेकेा मनाङ जाने र अन्नपूर्ण पैदलयात्राकेा प्रवेशद्भार लमजुङकेा वेशिसहर हेर्दा पटुके वाटेालार्इ अहिलेनै सेाच्ने वेला भइ सके जस्तेा लाग्छ ।
डाडां कांडाकेा धनी हाम्रेा देशमा वस्तीहरू पनि एकत्रित नभै छरिएर केाही वेसीमा, केाही लेकमा , केाही भीर र पाखामा रहेको देख्दा सवैले समानुपातिक ढंगले विकास निर्माणकेा उपभेाग गर्न पाएकेा देखिदैन । सवैले सवै कुराकेा वरावरी सुविधा पाउन छरिएर रहेका वस्तीलार्इ ठाउं ठाउंमा एकत्रित गरेर अावास वसाल्न सके कस्तेा हेला ,काठमाडैा छेाडेर वाहिर घुम्दा मेरा मनमा वरेावर अाइरहने कुरा हेा येा । त्यसेा हुंदा राज्यले शिक्षा ,स्वास्थ्य, खानेपानी, वाटोघाटेा, विजुली, टेलिफेान र संचारका अाधुनिक सुविधा पुर्रयाउन सजिलेा हुने थियेा कि । सवै जात जातिकेा यी कुरामा पहुंच पनि पुग्थ्येा । जसले गर्दा सवै तह वर्ग जात जातिले विकासकेा प्रतिफल मा साझेदारी गर्न पाउंथे कि ।
हाम्रेा यात्रा कृस्नअस्टमीकेा दिन परेकेा रहेछ । वाटेा घाटेामा त्यसैकेा चहल पहल ठाउं ठाउंमा देखिन्थ्येा । धर्म संस्कृतिकेा धरेाहर नेपालमा समय जता पुगे पनि उनीहरूकेा अथाहा विस्वास पेाखिएकेा देखिन्थ्येा । हामी पाउंदी, कालीमाटी हुंदै हाम्रा कुशल चालक इन्द्जीले अगाडी वढाइरहेको गाडीले फलामे पाउंदी पुल तर्छ । येा पुल तनहुं र लमजुङकेा सीमामा रहेछ । पुल तरे पछि हामी लमजुङ जिल्ला टेक्छैा । अनि फलामे वेार्डर्मा सजिएका अक्षरहरूमार्फत जिविस लमजुङले हामीलार्इ स्वागत गर्छ । सानेा वजार हुंदै खुल्ला दिशा पिसाव मुक्त क्षेत्र भेाटे अेाडार गाविसमा विदेसीलार्इ दुहुने संस्थामिलेर सडककेा छेउमा राखेकेा वार्ड देख्छैा । सीउंडी चेाक अासपास राम्रा अाधुनिक रंगरेागनले पेातिएका घर हाम्रा अगाडी नाच्छन् । झरीले रूझेर पर्सीएका हरिया डांडाहरू, हरिया पाखा पखेरा मान्छेकेा मन जित्दै हांसीरहेकेा देख्छैा । वाटेामा पर्ने उदीपुर गाविसकेा लमतन्न सडकमा हाम्रा गाडीका पाङग्रा गुड्रदै मध्य मस्याङदी जलविद्घुत अायेाजनालार्इ दाहिने पार्दै हामी अगाडी वढ्छैा । किनकी हामीलाइ घले गाउंले लेाभ्यार्इ रहेकेा थियेा । त्यसैले हामी यता फालिएको पासोमा अल्झेनैा । जलश्रेातकेा अथाहा सम्पत्ति वेाकेकेा हाम्रेा देश साउने मुल फुटेर जता हेरे पनि हिउं खसे जस्तेा छांगेाले हामीलाइ जिस्काइ रहेकेा थियेा । मन लेाभ्याउने गरी कुलकुलाइ रहेकेा थियेा । मैले घडी हेरे , घडीमा सानेा र ठूलेा सुर्इ उत्तर दक्षिणा तर्फ फर्केर वसेका थिए । समुन्द् सतहवाट अाठसय मिटर उचाइमा रहेकेा लमजुङकेा सदरमुकाम वेसीसहर पुग्दा अर्थात पैाने तीन वज्न लागि सकेकेा संकेत घडीले दिइहेकेा थियेा ।
हामी सवैले अाफना खुटृाहरूलार्इ अव ६ घंटा हिडन पर्छ भनेर सुर्रयार्इ रेहका थियैा । खुटृाहरूले पनि दिमागलार्इ त्यही सूचना दि सकेका थिए । करिव २१ सय मीटरकेा उचाइमा रहेकेा घले गाउंपुग्न सजिलेा हेास भनेर रैथाने प्रेम घलेलार्इ सम्पर्क गर्न खेाज्यैा । उनलाइ काठमाडैा देखि वाटेाभरीनै गेाजी फेान चलाए पनि सम्पर्क हुन सकिरहेका थिएन ।
वेशीसहर पुगेपिछ हाम्रेा गाडी चैावाटेा नजिकै रेाकियेा । हामी गाडीवाट फुत्त फुत्त झर्दै अगुवा भन्ने हामीहरू घलेकै खेाजीमा यता उता यता खुव घुम्यैा । अन्तमा तल्लेा वजार चैावाटेा नजिकै घले गाउंकेा पैदल यात्रा गर्ने वाटैमा रहेकेा घले गाउं रिर्सेार्ट हेाटलमा भेटृायैा । उनीसंगको भलाकुसारी पछि उनी घलेगाउं गाविसका एमालेवाट दुवै पटक निर्वाचित निवर्तमान गाविस अध्यक्ष र ग्रामिण पर्यटन व्यवस्थापन समिति घलेगाउंको अध्यक्ष रहेको कुरा थाहा पायैा । हाम्रा कुरा सुनिसकेपछि उनले हिंडेर जाने कुरा रेाक्न लगाए । समय अलि घर्कि सकेकेा रहेछ । तर हामीले अाज त्यहा पुग्नै पर्छ भन्ने हाम्रो समस्या राखेपछि घले गाउं पुग्ने अर्केा उपाए उनले वताए । गाडी चढेर खुटृा र शरीरलार्इ अाराम दिए पनि मनलार्इ भने चुलवुल पार्ने उपाए । महेन्द्रा वेालेरेा फेारह्ववील जीप चढेर जाने व्यवस्था उनले मिलार्इ दि हाले । मिठास स्वभावका प्रेम घलेले मन र मुटु तान्ने चुम्वकै वेाकेका रहेछन् कि हामी उनै तिर तानियैा । घले गाउंका अाफना पाहुनालार्इ त्यहा पुर्रयाउन उनी यही वेशीसहरमा वसेर चांजेा पांजेा मिलाउंदा रहेछन्र । अाफु भने महिनाकेा दुर्इ पल्ट वैठक र छलफलका लागि पुग्ने रहेछन् । उनका कुरा सुने पछि मैले हात वढाउंदै हाम्रेा त जात भात सवै ठ्रयाक्कै मिलेछ भन्दा एकछिन सवैकेा हांसेा फुत्कियको थियो ।
करिव ४.३० वजे तिर वेशीसहरवाट हाम्रो गाडी चल्यो । भदैा महिना भए पनि यसपाला भदैारे घाम र भदैारे पानी देख्न पाइएकेा थिएन । साउने झरी नै चलिरहेकेा थियेा । उकालेा लाग्ने वित्तिक्कैकेा वाटेा देख्दा मेरेा मुटुले ढयाङग्रेा ठेाक्ला जस्तेा भयेा । घले गाउं पुगिएलाकि यतै थला परियला भनेर । वास्तवमा घले गाउंकेा यात्रा गर्ने समय येा थिएन । वाटेामा जांदा , त्यहा वस्दा , फर्कदा हामी सवैलार्इ यस्तै लाग्येा । लमजुङका लामा जुकाले नखाएकेा नभ्याएकेा कसैलार्इ भएन । हामी यसवाट केाही अछुतेा रहनै सकेनैा । घलेगाउं जाने वाटोमा महेन्द्रा वलेरेा जीप जस्ता गाडी वाहेक अन्यले चिहाउन पनि गाहे्ा रहेछ । येा जीपकेा करामत चांहि राम्ररीनै देखियेा । पहाडी वाटेाकेा लागि येा गाडी उपयुक्त छ भन्थे । तैपनि वेला वेलामा हिलेामा फसेपछि भने ठेल्नै पर्थेयेा । गाडी ठेल्दै, छाङगेाकेा पानीले रूझदै के हेाला कसेा हेाला भन्ने सन्त्रास लिएर अगाडी वढीरहेकेा थियैा । क्मश…..
This entry was posted on अगस्ट 30, 2011 at 11:00 बिहान and is filed under वर्गविहीन.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.